को’रोना संक्र’मितको उप’चारमा ख’टिएका २६ वर्षीय डा.सुभम उपाध्यायको को’रोना बाटै मृ’त्यु ! – yuwa Awaj
को’रोना संक्र’मितको उप’चारमा ख’टिएका २६ वर्षीय डा.सुभम उपाध्यायको को’रोना बाटै मृ’त्यु !
मंग्सिर १२, २०७७ शुक्रबार 4
एजेन्सी : को’रोना भा’इरस संक्र’मितको उ’पचारमा लामो समयसम्म काम गरेका डा. शुभम उपाध्यायको को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु भएको छ । महिनौँसम्म उनी भारत मध्यप्रदेशको राज’धानी भोपालमा को’रोना सं\_क्रमितको उपचा’रमा ख’टिएका थिए ।
को’रोना संक्र’मितको उ’पचार गर्ने डा’क्टर उपा’ध्यायको को’रोना संक्र’मणबाटै मृ’त्यु भएको हो ।को’रोना सं’क्रमणबाट उनको फो’क्सोको ९० प्रतिशत भागमा पा’नी भ’रिएको थियो । हवा’इ जहा’जको माध्यमबाट उप’चारका लागि चेन्नइ लै’जाने प्रयास अस’फल भयो ।
तु’फान आउने आशं’कामा ह’वाइ से’वा ब’न्द भएपछि उनमा फो’क्सो प्र’त्यारोपण गर्ने तयारी पनि काम लागेन । उनको चिरा’यू अ’स्पतालमा मृ’त्यु भएको छ ।२६ वर्षीय डाक्टर भोपालको सागर मे’डिकल कलेजको शि’क्षण अस्पता’लमा काम गर्थे ।
२८ अक्टु’बरमा को’रोना संक्र’मण भएपछि उनलाई १० नोभे’म्बरमा भोपालको चि’रायू अस्प’तालमा भ’र्ना गरिएको थियो । भारतीय सञ्चा’रमाध्यम र सामाजिक स’ञ्जालमा उनका बारेमा च’र्चापरिच’र्चा भएपछि मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले चेन्नइ लगेर फो’क्सो प्र’त्यारोपणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, तु’फानले गर्दा चे’न्नइ लै’जान नसकिएको र उनको बुधबार मृ’त्यु भएको चौहानले बताएका छन् ।डा. शुभम उपाध्या’यको मृ’त्युपछि भारतमा मात्रै नभएर संसारभर उनका बारेमा च’र्चा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री चौ’हानले भनेका छन्, ‘कोरो’नावि’रुद्धको अभियानमा नि_रन्तर ख’टिएका डा.शुभम उपाध्यायको निध’नले म अ’त्यन्तै दु’खी छु ।
को’रोना सं’क्रमितको उप’चारमा नि’स्वार्थ काम गरेका उनी सं’क्रमितको उ’पचारमै ख’टिएका बेलामा संक्र’मित भएका थिए । स’माज र मा’नवीय से’वाको उत्कृ’ष्ट नमुना एवं अ’नुपम उदाहरण बनेका छन् डा. शुभम ।’
प्रदेश सरकारले डा. उपाध्यायको उप’चारका लागि १ करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घो’षणा गरेको थियो । ८० लाख भारतीय रुपैयाँमा चे’न्नइको एक अस्प’तालमा फो’क्सो
प्र’त्यारोपण गर्ने अ’न्तिम तयारी गरे पनि सफल हुन सकेन ।२६ वर्षीय डा.शुभमका बारेमा अन्त’र्राष्ट्रिय मिडियामा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भएका छन् । संसारभरबाट उनीप्रति श्र’द्धाञ्जली अ’र्पण गर्दै उनको उदाह’रणीय कामको प्र’शंसा गरिएको छ ।
Prevमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल भन्नुहुन्छ : अब भूमिमा दोहोरो स्वा’मित्व रहँदैन…हेर्नुहोस् ।
Nextअमेरिकामा पहिलो चरणमा ६४ लाख भ्या’क्सिन वितरणको तयारी…हेर्नुहोस् ।
अभिनेत्री स्वेता खड्का धनगढीका युवकसँग गर्दैछिन बिहे गते कहिले गर्दिछिन…हेर्नुहोस् ।
नेता विष्णु रिजाल भन्नुहुन्छ : ईश्वर पाेखरेल एकतावि’राेधी र फुट-परस्त हुन्…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1299)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1299)